रिक्त दरबन्दी विवरण नआउँदा सुदूरपश्चिममा लोक सेवा विज्ञापनमा ढिलाइ, कहिले खुल्छ लोक सेवा विज्ञापन? - Khabar Center
रिक्त दरबन्दी विवरण नआउँदा सुदूरपश्चिममा लोक सेवा विज्ञापनमा ढिलाइ, कहिले खुल्छ लोक सेवा विज्ञापन?
रिक्त दरबन्दी विवरण नआउँदा सुदूरपश्चिममा लोक सेवा विज्ञापनमा ढिलाइ भएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले रिक्त कर्मचारीको यकिन तथ्यांक पठाउन नसक्दा विज्ञापन खोल्न ढिलाइ भएको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमले अहिले विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीका लागि पाठ्यक्रम बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीको विवरण प्राप्त हुने बित्तिकै विज्ञापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए।
प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहलाई पनि आवश्यक कर्मचारीको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये ३५ वटा स्थानीय तहले आवश्यक विवरण पठाए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम स्थापना भएको आउँदो चैत महिनामा १ वर्ष पुग्दैछ। नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुरूप संघीय संरचना अन्तर्गत गत वर्षको चैत ९ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिममा स्थापना भएको थियो।
तर, स्थापनाको आधा वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले न त विज्ञापन खुलाउन सकेको छ न त पूर्ण रूपमा पाठ्यक्रम नै निर्माण गर्न सकेको छ।
अन्य प्रदेशका लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरी कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया पनि सुरू गरिसकेका छन्। तर सुदूरपश्चिम विज्ञापन प्रकाशनका लागि अन्यौल सिर्जना हुँदा तयारीमा रहेकाहरू भने निराश छन्। करारमा आफ्नाहरू नियुक्त गर्ने परिपाटीले लोक सेवाको विज्ञापनमा ढिलाइ भैरहेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थापनाको ८ महिने अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवश्यक पर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली र प्रदेश लोक सेवा ऐन कार्यसञ्चालन निर्देशिका पनि लागु भैसकेको छ। तर पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा भने ढिलाइ भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति :मंसिर ९ २०७८ बिहिवार - १२:०८:५० बजे
लोक सेवाले सार्वजनिक गर्यो विभिन्न सेवाका उपसचिवहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा, को-को भए पास (नामावलीसहित)
यस्तो छ लोकसेवा आयोगको परीक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, एकै पटकमा पास
स्वास्थ्य सेवाको ११औं तहमा नाम निकालेका यी २३ जनाको अन्तर्वार्ताको समय संशोधन (सूचनासहित)
लोक सेवाले रद्द गर्यो स्वास्थ्य सेवातर्फ एघारौँ तहका दर्जनौँको परीक्षा
लोकसेवाले जारी गर्यो सेनाको परिक्षा केन्द्र कायम गरेको सुचना